January 11, 2020 - ThutaSone
(၁၅)မိနစ် တရားထိုင်နည်း တစ်နေ့လျှင် (၁၅)မိနစ်ခန့် တရားထိုင် ကြည့်ပါ
January 11, 2020 ThutaSone 0
ထူးခြားသော အကျိုးကျေးဇူး များ၊ ထူးခြားသော ကံကောင်းမှုများ၊ သင့်ထံသို့ ဧကန်အမြန် ရောက်ရှိလာပေလိမ့်မည်။ အမျိုးသား ယောဂီ များမှာ တင်ပလ္လင်ခွေ ထိုင်လျှက် ၎င်းအမျိုးသမီး ယောဂီ များမှာ မိန်းမထိုင် ကျုံ့ကျုံ့ထိုင်လျှက် ၎င်း ၊ခါးကို မတောင့်လွန်း၊ မလျော့မကုန်းလွန်းဘဲ အလိုက်သင့်သလို တာရှည်ထိုင်နိုင်အောင် ထားပါ။ […]
Winner ဆုကြီးကိုမရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းပွဲတွေဆက်တိုက် မနားပဲဆိုနေရတဲ့ အထိ အောင်မြင်နေတဲ့ အေးမြဖြူ
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Winner ဆုကြီးကိုမရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲ​ပေးအပ်တဲ့ Winnerဆုကြီးကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထား​အေးမြဖြူလေးကတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကအနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနုပညာမှာပါရမီပါတဲ့သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီးမပြီးဆုံးသေးခင်ကတည်း​ဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေ​ဖျော်ဖြေပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခံနေရတဲ့အထိကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုပါဝင်ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ နာမည်ကတော့”ချစ်ခင်စမှော်ံလို့ သိရှိရပါတယ်။မင်းသားချော ဒေါင်း၊ကျော်ထက်အောင်ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ မိုးဟေကို ပိုင်ဖြိုးသုတို့နဲ့အတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆိုနေရတဲ့ အေးမြဖြူကမန္တလေးက ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေ​ဖျော်ဖြေဖို့ သွားနေပါပြီနော်ပုံလေးကတော့ လေဆိပ်ကနေ ဒီမနက်ကမှ သူမ Page ကနေတင်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ် Unicode မွနျမာအိုငျဒေါပွိုငျပှဲကွီးမှာ […]
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ချမ်းသာလိုလျှင် ဒီလိုလုပ်ပေးပါ…
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ချမ်းသာလိုလျှင် ဒီလိုလုပ်ပေးပါ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ချမ်းသာလိုလျှင် မည်သည့်လုပ်ငန်းပဲလုပ်လုပ်အဆင်မပြေကြသူများ…. မိမိရည်မှန်းထားသောကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်မလာ၍ ဝန်ထမ်းဘဝနှင့်သာနှစ်မျောပြီး ငွေကြေးမစုနိုင်ကြသူများ။ ကြီးပွားချမ်းသာ၍ စိတ်ချမ်းသာသာနေချင်ကြသူများ…. တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းကြက်ဥ(၃)လုံးခန့်ကိုမိမိအိမ်ဘုရားတွင် အမြဲတစေလှူဒါန်းပါ။ တစ်ပတ်တွင် တကြိမ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ယခင် ကပ်လှူ ထားသောကြက်ဥ(၃)လုံးအားစွန့်၍ အသစ်ထပ်မံကပ်ပါ။ “အမြဲထာဝရကိုယ်ရောကျမ်းမာစိတ်ရောချမ်းသာစွာဖြင့် စီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးတက်ရပါစေလို၏”ဟုဆုတောင်းပါ။ ဤအစီအရင်သည် အလွန်အစွမ်းထက်ထိရောက်သောကြောင့် […]
သမီးလေးမအေးမို့မို့မောင်အတွက် ရည်စူးပြီးသံဃာအပါး (၁၀၀)ကို နေ့ဆွမ်းကပ်လှူပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လောက်ကတည်းက အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ခိုင်နှင်းဝေဟာ အနုပညာအလုပ်တွေထက် လူမှုအကျိုးပြု ပရဟိတအလုပ်တွေကို ပိုမိုပြီးအားကြိုးမာန်တက်လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက သူမကို ပရဟိတမင်းသမီးလို့ခေါ်ဆိုနေကြပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာလည်း ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် “ခိုင်နှင်းဝေ ရင်သွေးလေးများဂေဟာ”လို့ အမည်ရတဲ့ ဂေဟာအသစ်လေးကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလို ဂေဟာဖွင့်လှစ်ပြီး ကလေးတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ အပေါ် တချို့သော […]
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း အတွက် ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်း ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေ ကမ္ဘာလွမ်းတော့ပါမည်
ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေ ကမ္ဘာလွမ်းတော့မည်။ဗုဒ္ဓဘာသာသည်အကောင်းဆုံးဘာသာဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာ ပြန့်နှံစေသောဝ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းအတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာပါပဲဗျာ. . ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို ရွတ်ဆိုနေကြတာ ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်တ ယခုဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အန္ဒိယ၊ဥရောပ၊ရုရှား မှ သည် အာဖရိကအထိ ပျံ့ပွားလို့နေပါပြီ. . . ဗုဒ္ဓ တရားတော်တွေကို ကြည်နူးဖွယ်ရွတ်ဆို ပွားများနေကြတာ အရမ်းကို […]
ခရီးသွားလျှင် ရွတ်ဆိုရမည့် အန္တာရာယ်ကင်း ဘေးကင်း ဂါထာတော်
ယနေ့ခေတ်တွင်အတေ​ကြောက်စရာကောင်းလာ၏ခရီးသွားချင် စိတ်တောင်တချို့နေရာတွေ မသွားမလာ​အောင်ဖြစ်မိ၏ …။ သတင်းတွေကလည်အန်ိဋ္ဌာရုံတွေကသာများလာသည်ဟိုနေရာဖြင့်ကားတိုက်တာဆိုင်ကယ်မှောက်ဟိုနေရာဖြင့်ဓာက်လိုက်စသဖြင့်ပေါ့လေမကြားချင်လှအဆုံးပါပဲဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးများကိုနိုင်ငံခြားမှာဖြစ်ဖြစ်အဝေးတစ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားလာလှုပ်ရှားနေသူဖြစ်ဖြစ်အန္တာရာယ်ကင်​စေချင်သည်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်လူတိုင်းအန္တာရာယ်ကင်းချင်ကြပါသည်မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မှအန္တာရာယ်မကင်းသူဒုက္ခရောက်ချင်သူလည် ရှိမည် မဟုတ်ပါ …။ ရှေးအခါကဆရာအရှင်တိူိ့သည်အန္တာရာယ်ကင်း ဂါထာအမျိူးမျိူးကိုဖွဲ့ခဲ့ကြသည် ထိုထိုဂါထာများထဲ​အောက်ပါဂါထာအား ထုတ်နူ​ရေးသားလိုက်ပါသည်အန္တာရယ်ကင်းဂါထာတော်ဗုဒ္ဓဂုဏော အနန္တော ဓမ္မဂုဏောအနန္တော သံဃဂုဏောအနန္တော မာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဗုဒ္ဓေါမေသရဏံအညံနတ္ထိဓမ္မောသရဏံအညံနတ္ထိသံဃောမေသရဏံအညံ နတ္ထိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ ဧသာ ဥတ္ထိဂစ္ဆအမုမှိသြကာသေတိဋ္ဌာဟိဂါထာတော်ကြီးအားတနေ့၃၇ ခေါက်ထပ်မနည်းနှလုံးသွင်း ရွတ်ဖက်ပ​လေ […]
တကယ်စိတ်ညစ်လာတဲ့အခါ အကျင့် ဖြစ်မသွားဖို့ ဒါကိုလုပ်ပါ
စိတ်တကယ်ညစ်လာတဲ့အခါ တကယ်လို့ စိတ်ညစ်လာပြီဆိုရင် ကိုယ်နေတဲ့အခန်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပါ။ အိပ်ရာခြင်ထောင် ခေါင်းအုံးတွေကို လျှော်ဖွတ်ပြီးအသစ်နဲ့ လဲလိုက်ပါ။ပြီးတော့ရေချိုးလိုက်ပါ။ ရေချိုးပြီးရင် ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ လျှော်ဖွတ်ပြီးသား အ၀တ်လေးကို ၀တ်လိုက်ပါ။ အားလုံးပြီးတာနဲ့ အသစ်လှဲပြီးသားအိပ်ရာပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး ခါးကိုဖြောင့်ဖြောင့်ထား မျက်လုံးလေးမှိတ် လက်အုပ်လေးချီပြီး ငါးပါးသီလကို ယူလိုက်ပါ။ တစ်ဆက်တည်းပဲ မြတ်စွာဘုရား ဘုရားတပည့်တော် […]
ယူကရိန်းလေယာဉ်ကို မှားယွင်းပြီး ပစ်ချမိကြောင်း အီရန်ဝန်ခံ…
ယူကရိန်းလေယာဉ်ကို ပစ်ချမိကြောင်း အီရန်ဝန်ခံ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက် မနက်အစောပိုင်းမှာ တဟီရန် မြို့တော်ကနေ ပျံတက်သွားတဲ့ ယူကရိန်း နိုင်ငံတကာ လေကြောင်း ခရီးစဉ်အမှတ် ၇၅၂ ကို ရည်ရွယ်ချက် မပါဘဲ မှားယွင်း ပစ်ချလိုက်မိတယ်လို့ အီရန် အစိုးရ မီဒီယာက အတည်ပြု ကြေညာသွားပါတယ်။ယူကရိန်း […]
ဗိုလ်ချုပ်ပုံငွေစက္ကူ 1000 တန်တွေ ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့ နောက် ပြည်သူတွေ ၀မ်းသာခဲ့ကြသလို ဘဏ်မှာသွားပြီး လဲလှယ်ယူရင် ပျော်ခဲ့ကြရပါတယ်လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးကလည်း ဗိုလ်ချုပ်ပုံငွေက္က္ကူတွေ အလကားဝေပေးခဲ့သလို ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ငွေ တစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်ပါတာနဲ့ တစ်ဝက်ပဲရှင်း ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လည်း ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ် ခုတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ ငွေ 2000 ပါတာနဲ့ တည်းခိုနိုင်မယ့် […]